RUUSHKA HOREBA WUXUU LEEYAHAY SHARCIGA ILAALINTA XAYAWAANKA - MAQAALLO
Bishii December 18, 2018 ee Dumarka Qaranka ee Ruushka, akhriska labaad, sharci qabyo ah oo ku saabsan ilaalinta xayawaanka ayaa la qaatay. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee ah "walaalaha yaryar" waxay leeyihiin xuquuq, sida ku xusan Qodobka 4-aad ee qaanuunka qabyada ah, waa in [tilmaamaan]: "Xayawaanku waa shakhsiyaad awood u leh inay dareemaan dareemo iyo jirdil jireed."
Sharciga qabyada ah wuxuu bixiyaa, in natiijada, mulkiilayaasha xayawaanku ay si buuxda masuul uga yihiin kuwa la dhisay. Hadda, iyadoo la raacayo mamnuucista buuxda ee xayawaannada iyo kor u qaadista waxyaabaha la xiriira, iyo sidoo kale, ugu dhakhsaha badan waxaa jiri doona xayiraad ku saabsan tirada xayawaanka la dhigay.
Ilaa sannadka 2020, waxaa jiri doona u doodayaasha xayawaanka, kuwaas oo awoodi doona inay xakameyaan tayada nolosha xayawaanka, diiwaangelinta dembiyada xayawaanka sawirada ama fiidiyowga, iyo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, xayawaanka ka saaraan milkiilayaashooda.
Xusuusnoow in Duma aaney qaadan karin sharciga ilaalinta xoolaha sanado badan. Iskuday in la tixgeliyo biilka ayaa ku dhawaad ​​ilaa 1999.